Buruqda dabada, astaamaha, astaamaha iyo tilmaamaha | Ragga Stylish
In kastoo aysan u ekaan karin, futada waa mid ka mid ah meelaha ugu xasaasisan in aan ku leenahay jirkeena. Barar ku jira qaybtaas, nabar, dhaawacyo, waxay abuuri kartaa xanuun daran waxayna u horseedi kartaa infekshin.
Waxaa jira kala saar burooyinka futada, burooyinka, iyo babaasiirta. Waxay yihiin cuduro isku mid ah, laakiin leh astaamo u gaar ah.
2 Ma jiro xanuun ama dhiig
3 Xanuun iyo cuncun
4 Waa kala daadsanaan
6 Calool fadhiga ayaa sidoo kale soo saara buro ku yaal futada
8 Kuuskuus futada sababo laxiriira 'pilonidal cyst'
9 Kuuskuus sababtoo ah barar anorectal ah
Buruqda dabada badanaa uma soo muuqato si lama filaan ah, waa iska caadi inay ahaato natiijada cudurada qaarkood. Calool istaag badanaa waa dambiile.
T TALO CAAFIMAAD: Futada iyo gusku waa xubno aad muhiim ugu ah galmada ninka. Haddii aadan ku faraxsanayn cabirka guskaaga oo aad rabto inaad weynaato, waxaan kugula talineynaa soo dejiso buugga guska sayidkiisa adigoo gujinaya halkan
ka astaamuhu waxay kuxiranyihiin cilada keenaya futada futada. Kuwaas waxaa ka mid ah, heerkulka sarreeya ee aagga, xanuun marka la fadhiyo iyo saxaro, gubasho, cuncun iyo cuncun.
Ma jiro xanuun ama dhiig
Marka uusan jirin xanuun ama dhiig bax, waxay noqon kartaa buruqyo caadi ah oo futada ah, ama sidoo kale bilowga babaasiirta. Sikastaba xaalku ha ahaadee baaritaanka jireed ee xirfadlaha daryeelka caafimaadka. Waa in iska ilaali khalkhalgelinta aagga iyo is-dawaynta.
Xanuun iyo cuncun
Buruqyada futada waa nooc buurbuur oo sababa, markay saxaroodaan, a dareemid xanuun, gubasho iyo cuncun. Caadi ahaan burooyinka futada (sida ka duwan cudurada kale, sida burooyinka burooyinka), waa kuwo aan dhib lahayn, oo aan ka dhigneyn dhibaato daran.
Waxaa lagu talinayaa cab biyo badan, cuntooyinka dufanka badan leh, iyo suufka leh wax soo saar waxtar u leh daaweyntaada.
Waa kala daadsanaan
Feysal futada ayaa futada noqon doonta nabar ay sababtay xilli hore oo caloosha ah. Sababtoo ah foosha muruqyada futada, fissku ma bogsan karo. Way asal noqon karaan xanuun daran, gaar ahaan markaad saxarooto, iyo dhiig bax.
Daaweyntu waxay noqon kartaa mid caafimaad, xaalado fudud, ama waxay u baahan tahay faragelin qalliin.
Waa xaalad soo baxda maxaa yeelay xididdada ku xeeran futada ayaa barara, sababo dhawr ah awgood. Waxay noqon kartaa mudo calool fadhiga ka dib, sababtoo ah cadaadis xad dhaaf ah oo ka jira aagga, buurnida, cunto xumo, xitaa dhalmada awgood. Cadaadiskan, unugyada futada way weynaan karaan wayna dhiig bixi karaan.
Xaqiiqdii, lBaabasiirku wuxuu ka mid yahay sababaha ugu waaweyn ee samaysma buruq aagga futada. Waa maxay calaamadaha cudurka babaasiirta?
Buruqyo xasaasi ah ayaa ka muuqda agagaarka futada.
Markaan dabada ka nadiifinno musqusha, raadadka dhiiga ayaa soo muuqda.
Dhibaato badan markii aad fadhido ama aad saxarooto musqusha.
Daaweynta babaasiirta waxaa jira xalal badan, oo ka yimaada calool jilciyeyaasha, xanuun joojiyeyaasha, bacaha biyaha, iwm. Waqtiyada ugu daran qalliin ayaa lagama maarmaan ah.
Ma ahan xaalad halis ah ama adag in la daweeyo. Babaasiirta bidix ee aan la daaweyn waxay sababi kartaa dhaawac culus.
Calool fadhiga ayaa sidoo kale soo saara buro ku yaal futada
Goorma waqti badan ayaa udhaxeeya hal daad-gureyn iyo mid kale, calool istaagga ayaan ka hadalnaa. Xaalado badan oo ka mid ah kuuskan dhibta leh ee futada ayaa soo bixi kara. Calaamadaha calool istaaggu waa kuwo aad u kala duwan, oo isugu jira xanuun ku dhaca aagga caloosha, lallabbo, matag, daal iyo jajabin, dibbiro ku dhaca aagga caloosha, saxarada caloosha oo qalalan oo adag, saxaro yaryar, iwm.
Si loo daaweeyo calool fadhiga Had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad kordhiso boqolkiiba inta fiberka, badarka, khudaarta, miraha, iyo waliba cabitaan badan. Xaaladaha calool istaagga carruurta iyo haweenka uurka leh, xitaa waa lagugula talinayaa inaad booqato dhakhtarka.
In kastoo aysan u ekaan karin, haddana markii aan qabno colitis waxaan sidoo kale ku soo bixi karnaa burooyinka futada. Cudurka noocan ahi badanaa waa asalka xanuunka aagga caloosha, calool fadhiga, dawakhaad, daciifnimo iyo shuban. Mid ka mid ah sababaha ugu badan ee ku dhaca cudurka loo yaqaan 'colitis' bulshada maanta waa walaaca shucuurta.
LCalaamadaha colitis-ka waa la yaqaan. Abuurista buurbuur ee ku xeeran futada waxaa weheliya calool istaag, caabuq caloosha ah, isbeddello iyo isbeddello ku yimaada shaqada xiidmaha, hurdo la’aan, iyo xitaa niyad jab.
Sidee loo daaweeyaa colitis si wax ku ool ah? Waxaa lagugula talinayaa inaad hagaajiso cuntadaada, jimicsi maalinle ah, daawooyinka daweeya isku buuqa shucuurta, iyo daawooyinka uu kuu qoray dhakhtar ama takhasusle.
Kuuskuus futada sababo laxiriira 'pilonidal cyst'
Sameynta cyst pilonidal waxay ka dhacdaa aagga u dhexeeya badhida. Muuqaal ahaan, waa buro futada. Xitaa cyst-kan wuxuu u horseedi karaa infakshan, sii xumeynaya sawirka. Mabda 'ahaan ma jiraan astaamo muhiim ah, marka laga reebo jiritaanka buro yar oo agagaarka futada ah.
Marka la ogaado cida 'pilonidal cyst', Si looga hortago in aagga cudurka ku dhaco, waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loo daadiyo oo loo qaato antibayootik.
Kuuskuus sababtoo ah barar anorectal ah
Sabab kale oo aad u caan ah oo ah soo bixitaanka buurbuur ee futada ayaa ah mid ka mid ah kuuskuus aan caadi ahayn. Maqaarradan badanaa waxay ka soo baxaan isku ururinta malaxda aagga dabada. Sidan oo kale, buruq yar ayaa soo baxa. Asalka nabarradan badanaa waa faafa ama sababtoo ah qanjidhada malawadka ayaa la xanibay.
Waxaa ka mid ah astaamaha saxarada jirka, waxaa jira qandho, calool istaag, xanuun iyo xanuun goobta ka dhaca, muuqaalka muuqaalka burka, iwm.
ka antibiyootikada iyo xanuun joojiyeyaasha ayaa kaa caawin doona daaweynta cudurka, haddiiba ay dhacdo. Xaaladaha daran waxaad u baahan tahay qalliin.
Ilaha sawirka: CuidatePlus.com / Natursan / YouTube / cultivarsalud.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Ku futada futada
Waxaan u arkaa sharraxaadda mid aad u wanaagsan oo si sahlan loo fahmi karo, aad u faa'iido badan
Ku jawaab Luis fonsy
mouhamed lamiin dijo
Waad salaaman tahay, waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo. Waxaan ku armaa futada dameerkeyga marar badan sanado badan marwalbana meel qudha ayaan joogaa markasta oo ay ii timaado, waa inay furaan si meesha looga saaro malaxyada waxaanan rabaa inaan ogaado sababta adiga
Jawaab mouhamed lamine
Waad salaaman tihiin, dhawaana waan calool fadhiyey, maanta waan saxaroobay oo saxaradayduna waxay u soo baxday si adag sida dhagax iyo qaro weyn, futada ayaa i dhaawacday, markii aan dhammeeyay, waxaan ogaaday in xanuunku wali taagan yahay, futada ayaan eegay waxaanan arkay inaan qabo buro yar oo ku saabsan derbiyada futada, ma ogi haddii ay taasi sababtay saxarada qaro weyn ee adag? Dulucdu waxay tahay futankayga waa gubanayaa oo xanuun ayuu qabaa, hadda ma garanayo waxa aan ku qaadan karo tan,
Ku jawaab cristopher
Waad salaaman tihiin, waan ogahay inay tahay mowduuc anaga ragga ah, laakiin waxaan fahansanahay mudnaanta kahortaga iyo wada shaqeynta caafimaadka. Waxay igu dhacdaa aniga laba maalmood ka hor waxaan dareemay buro aan caadi aheyn sanadkeyga, wax aanan waligey dareemin, waxaan isku dayay inaan isku qoro arimahayga kahor intaanan baqin oo aan aado dhaqtarka. Tanina, maxaa yeelay ma dareemayo wax xanuun ah ama raaxo-darro ah, laakiin maxaa yeelay waxaan ogahay jirkeyga, waan ogahay inaysan caadi ahayn, maadaama aysan halkaas jirin. Waan jeclaan lahaa talo caafimaad oo aniga igu saabsan.
Jawaab Derby Barrios
Haye sidee wax yihiin? Wax kuus ah futada ayaan iska hayaa ilaa laba usbuuc markii hore waxaan moodayay inuu yahay babaasiir, laakiin wali ma tagin walina wuu dhiig baxayaa, maxay noqon kartaa? Weli uma tagin dhaqtarka, waxaan naftayda u siiyay boomaato xanuunka ah laakiin xanuunka horay ayuu uga baxay, hada waa dhiig baxayaa, mahadsanid inaad ka jawaabtay !!